ट्रम्प-किम एेतिहासिक वार्ता: के छ संयुक्त दस्तावेजमा ? – Everest Dainik
ट्रम्प-किम एेतिहासिक वार्ता: के छ संयुक्त दस्तावेजमा ?
२०७५, २९ जेष्ठ मंगलवार
सिंगापुरमा भएकाे शिखर वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उत्तर काेरिया परमाणु निशस्त्रिकरणका लागि तयार भएकाे बताएका छन् ।
वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प वार्ता निकै सकारात्मक र एतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, उनले संयुक्त दस्तावेजमा भएका कुरा सार्वजनिक गरेनन् । दिवाभोजपछि हुने पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।
यस्तै शिखर वार्तापछि उत्तर कोरियाली नेता किमले विगतलाई छाडेर अघि बढेको र विश्वले आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएको बताए । उनले राष्ट्रपति ट्रमलाई अंग्रेजीमा ‘नाइस टु मिट यू, मिस्टर प्रेसिडेन्ट’ भनेका थिए ।
शिखर वार्ता, संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर र फोटो सेसनमा राष्ट्रपति ट्रम र नेता किम निकै प्रसन्न देखिएको छन् । दुवै नेताले वार्ता एेतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएबाट वार्ता सकारात्मक भएको र यसले विश्वलाई नयाँ सन्देश दिने आँकलन गरिएको छ ।
तर, वार्ता सकारात्मक भनिए पनि वार्तामा भएका दुई पक्षीय ‘डिल’का बारेमा भने सबै अनविज्ञ छन् ।
विश्लेषकहरूले संयुक्त दस्तावेजमा वार्तालार्इ िनरन्तरता दिने, दुवै देशबाट उच्च स्तरकाे भ्रमणका लागि निम्ताे दिने, उत्तर काेरियामाथि लाग्दै अाएकाे नाकाबन्दीका बारेमा पुर्विचार गर्ने र अमेरिकाले उत्तर काेरियाकाे विकासमा सघाउनेलगायत प्याकेज संयुक्त दस्तावेजमा भएकाे अनुमान गरेका छन् ।
नेता किमले देशमाथि लागेको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी तोडेर देशलाई समृद्धितिर लैजान चाहान्छन्, भने राष्ट्रपति ट्रमलाई आफ्माथि लागेको अविश्वासको आरोप र आगामी निर्वाचनका लागि सिट सुरक्षित गर्नु मुख्य ध्येय देखिन्छ ।
ट्याग्स: Kim, Singapore, trump
अध्यक्ष प्रचण्ड अस्वस्थ, केही दिन धपेडी नगर्न चिकित्सकको सल्लाह
आइसीसी अवार्ड समारोहमा विराट कोहलीको वर्चस्व !
तीन राजदूतको नाम अनुमोदनः हेर्नुस्, को कहाँका लागि ?
आज पनि संसदमा काँग्रेसको नाराबाजी, १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित
फोर जी सेवा देशभर बिस्तार हुने बाटो खुल्यो, दूरसंचार प्राधिकरणले अघि बढायो फ्रिक्वेन्सी लिलामको प्रक्रिया
डाक्टर केसीलाई उत्सव मनाउन नेता योगेश भट्टराईको आग्रह
नेपाली टोलीको विदाई, क्याप्टेन खड्का भन्छन्, ‘युएईविरुद्धको सिरिज जित्छौ’
माओवादी-कम्युनिस्ट केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता